दार्जीलिङमा झण्डा प्रतियोगिता – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsदार्जीलिङमा झण्डा प्रतियोगिता
दार्जीलिङ पहाड़को राजनैतिक अवस्था अन्यौलपूर्ण भए पनि अहिले यहाँ झण्डा प्रतियोगिता गतिलैसित बढ़ेको छ। विशेष यो प्रतियोगिता गोजमुमो र गोरामुमोमाझनै भएको स्पष्ट छ। यसैले आजको दिनलाई गोरामुमोले दार्जीलिङ शहर अनि वरिपरिका स्थानहरूमा झण्डा लगाउने आफ्नो पालो मानेको छ।
यसै क्रममा गोरामुमो दार्जीलिङ ब्राञ्च कमिटीका मुख्य संयोजक एमजी सुब्बाको अगुवाईमा आज गोर्खा राष्ट्रिय नारी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले यहाँको तुङसुङदेखि दार्जीलिङ मोटर स्ट्यान्ड अनि रेलवे स्टेशनइलाकासम्मनै व्यापक मात्रामा पार्टीको झण्डा लगाए।
के दार्जीलिङमा गोरामुमोको जनसभा छ? जनसभाको कारणनै दार्जीलिङमा यसरी व्यापक मात्रामा पार्टीको झण्डा लगाइएको हो? भन्ने प्रश्‍न गर्दा गोरामुमो दार्जीलिङ ब्राञ्च कमिटीका मुख्य संयोजक एमजी सुब्बाले भने-गोरामुमोको दार्जीलिङमा अहिलेनै कुनै जनसभाको कार्यक्रम छैन।
तब किन झण्डा? भन्ने प्रश्‍न गर्दा उनले भने-होइन, यो नारी मोर्चाको पक्षबाट लगाइएको हो। गोरामुमोले आगामी 21 नोभेम्बरपछि मात्रै दार्जीलिङमा जनसभाको आयोजना गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ। स्मरण गराइन्छ, आगामी 21 नोभेम्बरको दिन दार्जीलिङ पहाड़को समस्या समाधान विषय लिएर राज्य सरकारको आह्वानमा पिन्टेल भिलेजमा द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ, जसमा भाग लिएपछि गोरामुमोले दार्जीलिङमा एक जनसभा गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि, अहिलेनै गोरामुमोले दार्जीलिङ शहर वरिपरि झण्डा लगाउनुको ठोस कारणनै पार्टीले बताएन।
यसैकारण गोरामुमो र गोजमुमोमाझ दार्जीलिङमा झण्डा लगाउने प्रतियोगिता शुरू भएको धेरैले अनुमान लगाएका छन्। किनभने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जीलिङमा गत दुइ सप्ताहअघि मात्रै जारी गरिएको नयाँ झण्डा व्यापकरूपमा लगाउने कार्य गरेको थियो। आज गोरामुमोले गोजमुमोको झण्डाकै हाराहारी आफ्नो झण्डा पनि लगाएको छ।